Njengoba ebhekene nalesi simo isihloko ezithakazelisayo kakhulu, kuba okokuqala kudingekile yazo zonke ukuze shí uqobo umkhosi zintathu Ongcwele. Phela, indaba yakhe elisuka waseBhayibhelini. Abaningi ukuhambisa le holidi omkhulu Folk imikhosi kanye kumnandi. Kukhona ngisho izimpawu kaZiqu-zintathu, futhi zihluke kakhulu, kodwa okwengeziwe ukuthi kamuva.
Ngokuvamile, ngosuku -zintathu Ongcwele ubizwa nangokuthi lwePentekoste, ngoba Orthodox baligubhe ngosuku wamashumi amahlanu ngemva Easter.
Ngaphambi kokuba uphendule lombuzo imibuzo eyayinesihloko esithi "UZiqu-zintathu, izimpawu kanye namasiko awo, uzungu," Woza eduze okwamanje nesenzakalo lomcimbi.
into umuntu oyedwa, khona-ke elinye ke ngokushesha kubo bonke - ngakho, njengoba othisha bazo kukhona kubo izinsuku ezingamashumi amane ngemva Ukuvuswa KukaJesu Kristu, abafundi bakhe wahlala ngomqondo njalo celebration. Ukusho goodbye kubo kuze kube isikhathi yeNkosi phambi lwabo lwasukuma phezu komhlaba. Yileyo indlela yena eqinisekisiwe abafundi bakhe ukuthi uma usuku lokugcina emhlabeni, ngeke abe khona phansi kanye yaya kuyise. Wathi ukuthi wayezobathumelela uMduduzi - Moya Longcwele oyovela kaNkulunkulu uBaba. Abaphostoli ekuqaleni abazange baqonde ukuthi kungasho, kodwa bakholelwa ukuthi indlela kungenxa izwi lakhe.
Livela ithempeli lokuqala
Phela lezi zenzakalo, zazaziwa emiphefumulweni yabo le besemuseni, njengoba umlilo eziko. Usuku luyalandisa usuku bahlangana ekamelweni eliphezulu esekusithekeni eNtabeni iZiyoni naseJerusalema, futhi kukhona ngenkuthalo bathandaza futhi basifunda imiBhalo. Ngakho, enye isiprofetho INkosi yeqiniso kaJesu Kristu: "Kusukela iZiyoni izydet umthetho nezwi likaJehova eJerusalema." Lena yindlela esontweni abangamaKristu bafika kuqala.
Eduze kwaba indlu, futhi omunye wabafundi ozithandayo leNkosi - umPhostoli Ioanna Bogoslova. Ngo isakhiwo esifanayo ngaphansi kaJesu Kristu futhi wahlala UnguNina KaNkulunkulu - Virgin Mary. Duzane wakhe sihlale uya abafundi. Ukuze bonke abakholwa kwaba insindiso nenduduzo.
Kwenzeka kanjani ukuba lo mkhosi-zintathu Ongcwele
Futhi ngakho-ke kwenzeka ukuthi ngosuku lweshumi Ascension, ngosuku lokuqala sokuvuna yamaJuda, lapho abaphostoli Virgin Mary babekhona ekamelweni elingaphezulu, ngehora lesithathu ntambama ngokuzumayo ukubhonga okukhulu, njengokungathi kokuba isiphepho siqalile. Emoyeni, kwakukhona amalangabi bekungenjalo wangempela, kodwa yemvelo efanayo ne ngoMlilo oNgcwele, eza njalo ukuze ePhasikeni eJerusalema, futhi akabi.
Swept Phezu kwamakhanda abaphostoli, amalangabi yawela kubo, futhi na ukuphumula. Bese ngoba lo mkhuba zangaphandle kanye iphutha futhi yangaphakathi, okuyinto eyenzeka ngo-imiphefumulo yabo, "zigcwele nina nonke uMoya oNgcwele." Konke abaphostoli Virgin wazizwa amandla angaphezu kwavamile, esahlanganisa ukuphila kuzo. Yileyo ndlela esizwa ngayo abafundi SeNkosi besithole ngokuyisimangaliso lesi sipho somusa sesenzo futhi ngaqala ukuqonda ukuthi izilimi ungakaze akhulunywe phambili. Konke lokhu kwakudingekile ukuze ngishumayele ivangeli emhlabeni wonke.
Zitshele onesiphiwo ngoMoya oNgcwele, Lowo nomuzwa wokuthi lena akuyona wokugcina iziphiwo ezingokomoya leNkosi, kufanele babambane ngezandla nomunye, kanjalo zakha isonto elisha elikhanyayo, okuyinto eyaba bengabonakali kaNkulunkulu ayekhona qobo lwaKhe, khomba bese senza imiphefumulo yabo.
abathandekayo baphuma izindonga ekamelweni eliphezulu entabeni iZiyoni. United neNkosi, uMoya oNgcwele, bahamba bayoshumayela wonke nokufundisa emhlabeni zikaKristu zothando.
Futhi manje, kumemori kwalo mcimbi emangalisayo lwePhentekoste usengakwazi ukushayela ngosuku lo mkhuba uMoya oNgcwele waphuma kuNkulunkulu uBaba, njengoba ayethembisile zabaphostoli, uNkulunkulu iNdodana. Ngakho kwaba khona imfihlakalo ubunye zintathu Ongcwele.
UZiqu-zintathu: izimpawu namasiko eRussia
Kuze kube manje umkhosi zintathu Ongcwele baba intandokazi kubantu Russian. Ngakho-ke, ihlobene kakhulu nentando yabantu, yamasiko nemikhuba elalela abantu, ngaphezu ekugubheni isonto.
Izimpawu-zintathu wasuka izikhathi yobuqaba yasendulo eRussia. Nge-zintathu, noma "semitskoy", "Semikova" ngesonto exhumene eziningi yenkolelo ezahlukene.
Leli viki anikezelwe unkulunkulukazi wokukhanya nentwasahlobo, baba owawina namademoni ebusika. Kulesi senzakalo, kwakukhona ukuzijabulisa ezinomsindo nemikhosi lonke. Isikhathi esimaphakathi ngoba zintathu Ongcwele - lena ekupheleni May noma ekuqaleni kuka-June, futhi kuba ikakhulukazi efanelekayo entwasahlobo iholide umhlaba kabusha, lapho zasemazweni fresh futhi aluhlaza ayikahlanganiswa elahlekile ubuhle bayo. Amaqaba mesyatseslov, okuyinto kwaqondana ngamaholide Christian, nomthelela ubudlelwane babo kakhudlwana komunye nomunye.
Ngokuhamba kwesikhathi, leli siko udumisa unkulunkulukazi wokukhanya nentwasahlobo Lada lasendulo kwaba ukhohliwe, futhi amasiko ubudala ihlanganiswe ne entsha, ukudala isimo esihle ngokungavamile nobungqabavu kuholide ehlobo yokuqala.
Futhi manje Semikova (semitskaya) ngesonto emva lwesikhombisa Easter, ophela ngosuku zintathu Ongcwele, waziwa ngokuthi "Green Christmastide," kodwa wabizwa ngokuthi "mermaid", "mkhosi zadushnymi", "jika". Futhi konke lokhu, kusobala, isibe esifuze ubuqaba Russian.
Yilokho abantu Russian phambi zintathu. Izimpawu kanye namasiko ngaleso sikhathi zazihluke kakhulu, kodwa ngokuyisisekelo base mkhosi omkhulu. Ngokwe imilolotelo abantu: "Fair Carnival uvakashele Semik ngokuthi, okuyiwona yena ukuhlonipha wonke nendumiso" Semik - lokhu ngoLwesine ngesikhathi kwesonto lesikhombisa ngemuva Easter kwePentekoste.
Okwenza KuZiqu-zintathu? Izimpawu namasiko iholide entwasahlobo zifana Carnival. Lilodwa umcimbi kuyenzeka ekupheleni ebusika kanye nezinye kwentwasahlobo, futhi kokubili kugujwa behlonipha ilanga abomvu.
Semik - ikakhulukazi iholide yentombazane, wedlula izinsuku ezintathu ngaphambi zintathu. Girls wonke umzana ngazo zonke izinhlobo zezinto izibiliboco babekhuphukela ogwini lomfula kanye amagoda ezimbali babeluka uboya, okuyinto ayisasetshenziswa njengendlela umhlobiso, kodwa njengentelezi ngokumelene amabutho ezimbi. Ezinye amantombazane azama ukuphakamisa ukuqagela namanetha wabaphonsa amanzi uma Wreath echibini, hhayi uthole intombazane washada kulo nyaka, uma kungekhona kwalasha (die). A uphawu oluhle, uma lezimbali kuzovela futhi ngiwele ngilwe ukugeleza. Khona-ke amantombazane bebecula umbuthano nangemidanso emhlabeni abacaphuni birch amagatsha, okuyinto uyanqunywa, bembe phansi futhi ehlotshiswe kuze kudabuke umhlane.
Yini angeke kwenziwe Ikhuluma ngoZiqu-zintathu
Shono abaningi banesithakazelo izibonakaliso zintathu, akunakwenzeka ukuba enze ngalolo suku nokuthi ukuze baligubhe. Uphawu lokuqala kakhulu wukuthi ngalolusuku awukwazi ukusebenza. Ngosuku-zintathu akunconyelwe zemishado imishado. Okunqanda earthworks. Nokho, isivuno esihle kakhulu usuku Holy Trinity amakhambi ahlukahlukene unyaka wonke, njengoba kunenkolelo ukuthi bayakufa nethonya kathathu ngokuphulukisa.
Ngokuvamile, kunezinhlobo ezahlukene, izimpawu ayamangalisa ngempela-zintathu. Okungamelwe ukwenze ngaphezulu? Lona umbuzo njalo, futhi nalo, kumelwe sihlolisise kabanzi ngokucophelela, ngoba kungenzeka ukuthi kukhona ungalungiseki.
Nalapha futhi, kusukela ezinsukwini ubuqaba KuZiqu-zintathu wayengakwazi ukubhukuda, ngoba ngosuku olulandelayo wafika ngesonto mermaid. Kukholakala ukuthi bonke izilokazane amanzi ezifana mermaids amanzi bayengelwa ekwenzeni kunethiwekhi yabo abantu abanganaki ngalesi sikhathi. Ngakho-ke, amanzi liyathandeka baqhele. Kwakubuye kube okungenakwenzeka ukuba ehlathini yedwa.
Izibonakaliso ebaluleke kakhulu
Nazi esimnandi kakhulu izimpawu kazwelonke Ikhuluma ngoZiqu-zintathu. Ngosuku olwandulela zintathu (e umzali ngoMgqibelo) sivunyiwe ukuya emathuneni ukuze bakhumbule nezihlobo zakhe esezafa. Uma othile ukhohlwe ukwenza kanjalo, kukholakala ukuthi abafileyo, uthukuthele, wakwazi ukukhetha othile emndenini kanye. Ngakho-ke, ngaphambi zintathu Kwahlelwa idina umngcwabo, izingubo Unikelé efile ukuze axoshe ukufa.
Isalukazi waya zintathu phezu kwamathuna kanye neaten kubo umshanelo birch emabuthweni okubi ancipha, futhi nalo ijabule efile futhi sikhuthaze ukuthula, ukuthula nokuzwana kuyo yonke emzaneni.
On isihloko "Ziqu-zintathu, amabika, izintelezi," khona-ke wooed eziningi uZiqu-zintathu, kwaba uphawu oluhle kakhulu. Bathi uma ukufanisa Ikhuluma ngoZiqu-zintathu, i-Indwangu - emshadweni, futhi kungakho impilo abashadayo kuzoba uthando nozwano.
Imvula Ikhuluma ngoZiqu-zintathu - unyaka omuhle isivuno, isikhunta sezulu efudumele.
Futhi ngemva kosuku zintathu ayebhekwa lokuzalwa kosuku Earth, lapho kungesebenze muntu kodwa inhliziyo yayibukhuni akavumanga kahle, futhi ababefuna ukuceba, hamba umcebo ndawonye. anama Umuntu omuhle ukhipha ezweni izibilini zabo okuthile okuyigugu kakhulu.
Izimpawu-zintathu zingase zishintshe kakhulu, futhi uma unamathela, ungazivikela kusuka izifo eziningi. Nokho, talisman main nebandla okubi bekulokhu engu- pectoral, okuyinto sonke isikhathi kufanele igqoke ngokwabo, ikakhulukazi kuZiqu-zintathu.
Manje ngesihloko esithi "Izimpawu kaZiqu-zintathu, akunakwenzeka nokuthi kungenzeka" eningi kumele kuqondwe. Ngalesi iholide udinga ukusetha itafula futhi ukuqoqa izivakashi ukuze uphumule futhi amaningi fun nomndeni kanye nabathandekayo.
umkhosi wePhentekoste lika
Isihloko "Ziqu-zintathu, amabika, izintelezi," kufanele kuphawulwe into ebaluleke kakhulu: bonke abelaphi nabathakathi ukwazi ukuthi ngalolu suku zonke amakhambi nethonya kathathu, kodwa okubaluleke nakakhulu ukwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi amaKristu ayalwa ukuba uchithe usuku ngomthandazo obungapheli kuMoya oNgcwele abaphostoli, bese ubacela ngesihe nesivikelo. Nomthandazo izenzo njalo imimoya emibi enamandla kakhulu kunanoma iyiphi ngesakhiwo ubuthakathi.
Iqhubeka isihloko "UZiqu-zintathu: izimpawu kanye namasiko awo, gobe", kufanele kuphawulwe ukuthi namuhla amasiko zishintshile kancane. Manje kwanele ukwenza kusihlwa noma ekuseni umkhuleko, bese ukuchitha isikhathi nomndeni, ukusunduza yonke le nkathazo kulo, musa ngakhubeka hhayi nokufunga ukugubha ngokufanele-zintathu, kodwa uJehova uyonika konke okungukuthi abadinga indoda nomndeni.
Izimpawu kaZiqu-zintathu bathi isiko Russian abantu unothe ukuze kule iholide ngesandla sakhe sokunene esontweni, athandaze kuJehova, futhi kwesokunxele uphethe isixha of amakhambi. Ngemuva kwenkonzo, ikholwa, abakhiphe ebandleni nokukhulekela zonke izinhlangothi ezine zomhlaba. Bese ibuyela ekhaya, sifake Wreath herbal nge igama eliwumlingo for inhlanhla nempilo enhle futhi siyibeke ngemva isithonjana eduze zintathu iholide.
Lapha kancane ukubukwa yobuqaba futhi kwathuthukiswa Amasiko obuKristu kanye ahlanganisiwe ukuze zibe yisikhungo esisodwa. Futhi kwakukhona akuphikisani lapha, bonke kakhulu ngokushelela futhi ngokuvumelanayo.
Stupa Buddhist: igama, a ukubaluleka okungokwenkolo. Buddhist namasiko
Isitshalo Engcwele eNdiya. Izitshalo in izinganekwane Indian
Cathedral Anglican St. Andrew: ukwaziswa okuthakazelisayo, amaphrojekthi omphakathi, indawo
AmaPentecostal: bangobani, abakukholwayo?
Pope - inhloko iSonto LamaKatolika
Buyekeza flash Umdlali
Uma izinso ubuhlungu, aqale ukwelashwa.
Uyini wobugebengu? Izinhlobo zobulelesi. Imisebenzi ka zobulelesi
Umlando omfishane ukuthuthukiswa biology. Amathemba Biology yokuthuthuka
Izimbangela, izimpawu, uphethwe kanye nokwelashwa kwangemva kokubeletha thyroiditis
Indlela yokwenza isicupho indoda ekhaya
Uhlelo lwe-3D lokufometha ifenisha - ingaphakathi elungile amahora amabili
20 abacebe kakhulu emlandweni izigebengu
Rose shakira - ukukhetha balimi